အကြှနျုပျ၏ရေဒါ flash ကိုယခုအဘယ်အရာကိုပယ်သွားတယ်? | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
အကြှနျုပျ၏ရေဒါ flash ကိုယခုအဘယ်အရာကိုပယ်သွားတယ်?
အကယ်၍ သင်ကားမောင်းနေစဉ်ရေဒါသို့မဟုတ်မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုရှိသောthroughရိယာကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ကွက်များကစားနိုင်ပြီးဒဏ်ငွေဖြင့်အဆုံးသတ်နိုင်သောအမှားများစွာရှိသည်။ DGT နှင့်ပတ်သက်သောဒဏ်ငွေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိုးဖောက်မှုကိုနောက်ထပ်မသွားစေလိုလျှင်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသည်။ သငျသညျအစဉျအမွဲရှိပါက အသွားအလာဒဏ်ငွေတိုင်ပင်ဖို့ဘယ်လိုနှင့်ပတ်သက်။ သံသယဒါမင်းရဲ့ပို့စ်ပဲ
ယာဉ်ကြောဒဏ်ငွေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှကိုပြောပြရန်ဤဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်ကပ်အပ်နှံပါမည်။
လတ်တလောတွင်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုအချိန်မရွေးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ငါတို့ကအင်တာနက်သုံးတဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး (သို့) ကွန်ပျူတာပဲလိုတယ် ဆိုင်းငံ့ဒဏ်ငွေရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်.
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြကြသည် အသွားအလာလက်မှတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်၊ သင်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည့်ယာဉ်ကြောဒဏ်ရာများအကြောင်းရှာတွေ့နိုင်မည့်အခြားပလက်ဖောင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
၎င်းကို TESTRA အမည်နဲ့သိပြီးသင်ဘယ်နေရာကို ၀ င်ရမယ် ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောပိတ်ဆို့အရေးယူမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအကြောင်းကြားစာအားလုံးကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ် အဆိုပါ DGT ၏။ ဤနေရာတွင်သင်သည်ယာဉ်၏မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ DNI သို့မဟုတ်အမည်နှင့်နာမည်ဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ တရား ၀ င်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုဖယ်ထုတ်ရန်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်အခြားသူများအားသင်၏အချက်အလက်များကို TESTRA တွင်မမြင်စေလိုပါကဖယ်ထုတ်ထားသည့်စာရင်းထဲထည့်ရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
သင်သည် Electronic Road Directorate (DEV) တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံသားများအားလုံးလုပ်အားပေးနိုင်သောအခမဲ့ဖြစ်သည် ဒဏ်ငွေအကြောင်းကြားစာကိုအီးမေးလ်ဖြင့်လက်ခံရရှိသည်, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသွားအလာကိစ္စရပ်များအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုပိတ်ဆို့ထားသောအခြားအုပ်ချုပ်ရေး။ တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအားလုံးအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
သင့်မှာဒဏ်ငွေရှိရင်အီးမေးလ်၊ စာတိုနဲ့အသိပေးတာကရိုးရှင်းပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ သင်စာရွက်စာတမ်းအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အချက်အလက်များကို DGT တွင်မွမ်းမံပါကဒဏ်ငွေကိုသင်အယူခံဝင်နိုင်သည်။ လူကြိုက်များသောယုံကြည်ချက်တစ်ခုမှာသင်၏အချက်အလက်သည် DGT တွင်မပါလျှင်သို့မဟုတ်သင်ပြောင်းလဲမှုလိပ်စာကိုမွမ်းမံပါကသင်သည်ယာဉ်အသွားအလာဒဏ်ငွေကိုအခမဲ့ပေးရလိမ့်မည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာအသိပေးချက်များအားလုံးကိုအသိပေးကြေငြာချက်ဘုတ်အဖွဲ့မှတဆင့်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးကြေငြာခြင်းခံရသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်သည်နောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ်ပါကသင်ဒဏ်ရိုက်ခံရမည်မဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့အားအယူခံဝင်ရန်အခွင့်အရေးလည်းဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
သင့်တွင်အရှိန်လျှော့ခြင်း၊ ယာဉ်ရပ်နားရန်မသင့်လျော်ခြင်း၊ အနီရောင်မီးခွက်များစသည်တို့အတွက်လက်မှတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။ အမှုအရာအချိန်မီကောင်းစွာမပြုခဲ့ပါလျှင်အဆုံး၌ပိုမိုလေးနက်တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်မှတ်ပုံတင်မထားရင်၊ ရောက်လာတဲ့အီးမေးလ်အမြောက်အများကိုသူတို့မယုံကြနဲ့။ တဖန်သင်တို့တတ်နိုင်သမျှသတိရပါ သင့်ကားမှာဒဏ်ငွေရှိမရှိစစ်ဆေးပါ ကျနော်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များနှင့်အတူ။
လူအများစုကလမ်းပေါ်တွင်ကားပျံနေခြင်းနှင့်ရေဒါခုန်သံများဖြင့်တိတ်တဆိတ်သွားကြသည်။ ဒီမှာသူတို့ပေးမယ့်ဒဏ်ငွေကိုငါတို့ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာသံသယတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ အသေးအဖွဲပြစ်မှုသည်ပိုမိုလေးနက်သောပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်မီမပေးလျှင်သို့မဟုတ်ထိုသို့သောပြစ်မှုကျူးလွန်ရန်မတောင်းဆိုပါက။
ဒီနေ့မှာနည်းပညာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့မှာဒဏ်ငွေရှိလား၊ မရှိသည်ဖြစ်စေသူတို့ပြောတဲ့ web tools အမျိုးမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပိုမိုရှုပ်ထွေးခဲ့သည် သူတို့တစ်တွေအသွားအလာလက်မှတ်ထုတ်ပေးခဲ့ကွောငျးကိုငါသိ၏။ သင်တရားဝင်နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းနှင့်သာအနည်းငယ်သာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ဘူး။ စာပို့သူရောက်ရှိလာသည့်အကြောင်းကြားစာနှင့်အတူသင်လည်းစောင့်ရမည်။
သင့်တွင်ဆိုင်းငံ့ထားသောယာဉ်အသွားအလာလက်မှတ်ရှိမရှိမစိုးရိမ်ပါ အချို့သောပိုမိုလေးနက်သောပြproblemsနာများကို ဦး တည်သွားစေ။ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအဖွဲ့သည်အသိပေးစာကိုသက်ဆိုင်ရာစာစောင်များတွင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဒဏ်ငွေကိုအယူခံဝင်ရန်နှင့်ပေးဆောင်ရမည့်နောက်ဆုံးရက်ပြီးနောက်ဘဏ်ငွေစာရင်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းရမိသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးကိုရှောင်ရှားလိုခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယာဉ်အသွားအလာလက်မှတ်ကိုဆွေးနွေးခြင်းသည် ဦး စားပေးဖြစ်သင့်သည်။
နေ့တိုင်းယာဉ်သွားလာမှုလက်မှတ်ပိုများရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာကားမောင်းနေစဉ်ထိုင်ခုံခါးပတ်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့ယာဉ်အသွားအလာထိန်းချုပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိုင်ခုံခါးပတ်ကိုမ ၀ တ်ထားသောလူအများစုတို့သည်ပုဂ္ဂလိကယာဉ်မောင်းများနှင့်အများသုံးယာဉ်များတွင်ခရီးသည်များဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
ထိုင်ခုံခါးပတ်ကိုအမိုးအကာအဖြစ်သာမကသာမက၊ ဒါ့အပြင်မင်းရဲ့အသက်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်။ သင့်ထိုင်ခုံခါးပတ်အတွက်ဒဏ်ရိုက်ခံရသည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ ပထမ ဦး ဆုံးအသေအချာစစ်ဆေးပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်၍ သင်၏ယာဉ်အသွားအလာလက်မှတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ခေတ်မှာလူတွေများလာတယ် သူတို့ကမော်တော်ယာဉ်မှတာဝန်ရှိသည်မဟုတ် ထို့အပြင်သူတို့သည်ပိုမိုလေးနက်သောပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ယာဉ်အသွားအလာလက်မှတ်တစ်စောင်ရရှိသည်။ ဤအချက်အလက်ဖြင့်ယာဉ်အသွားအလာလက်မှတ်ကိုဆွေးနွေးခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုသင်လေ့လာနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အကြှနျုပျ၏ရေဒါ flash ကိုယခုအဘယ်အရာကိုပယ်သွားတယ်?